မောရှေသည်အီဂျစ်လူမျိုးဖြစ်ပြီး Akhenaton မှလွဲ၍ Afrikhepri Fondation ဖြစ်သည်
ကြာသပတေးနေ့, အောက်တိုဘာလ 29, 2020
မောရှေသည်အီဂျစ်လူမျိုးဖြစ်ပြီး Akhenaton မှလွဲ၍ အခြားမည်သူမျှဖြစ်လိမ့်မည်မဟုတ်
0 /5မှတ်စု : 4.17
Moïse (Hebrew משהבןעמרם Moshe ben Amram, ဂရိMωϋσῆς or Μωσῆς, Mō (y) sēs, Latin Moyses, Arabic موسى Moussa) သည်ဓလေ့ထုံးတမ်းအရပထမယုဒဘာသာ၏ပထမဆုံးပရောဖက်ဖြစ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာ "မောရှေ၏ဘာသာတရား" ကိုဆိုလိုသည်။ မောရှေသည်ဟေဗြဲကျမ်းစာထဲမှအရေးအကြီးဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ခြင်း၊ ဂျူးဘာသာဝင်များအတွက်ပညတ်တရားကိုလက်ခံခြင်း၊ ခရစ်ယာန်ဘာသာအတွက်ယေရှုခရစ်ကိုကြိုတင်ပုံဖော်ခြင်းနှင့်အစ္စလာမ်အတွက်တမန်တော်မုဟမ္မဒ်မတိုင်မီရှေ့ပြေးပုံရိပ်ဖြစ်သည်။
မောရှေသည်ဟီဘရူးဘာသာဖြင့်မôဲကိုအီဂျစ် onomastics မှAhmosès, Toutmosès, Ramses …ကဲ့သို့သောဖာရောဘုရင်တို့၏အမည်များဖြင့်လူသိများသောဒြပ်စင်တစ်ခုနှင့်ကိုက်ညီသည်။ ၎င်းသည်အချိန်အတန်ကြာနေထိုင်ခဲ့ကြသော“ အာရှ” Semites တွင်ဖော်ပြထားသည်။ အရှေ့ပိုင်းမြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဒေသတွင်အီဂျစ်နိုင်ငံ၏ရှည်လျားသောသမိုင်းကြောင်း၌ထပ်တလဲလဲဖြစ်ပေါ်နေသောဖြစ်ရပ်တစ်ခု”
ထို့ကြောင့် Moshe သည်“ မွေးဖွားရန်” သို့မဟုတ်“ begotten” ဟူသောအဓိပ္ပာယ်ရှိသော mss အမြစ်ကိုဆိုလိုသည်။ "Mosè (mes = child, mesy = ဤလောကသို့ခေါ်ဆောင်ခြင်းစသဖြင့်) မှမောရှေ၏နာမသည်လည်းအီဂျစ်အလွန်သွေဖည်ခြင်းဖြစ်သည်။ ပထမပိုင်းတွင်ဘုရားသခင့်နာမတော် - Thotmes, Ramèsစသည်တို့ပါဝင်သည်" မောရှေသည်ဤပေါင်းစပ်ထားသည့်အမည်၏ဒုတိယအပိုင်းကိုသာ theophore သာသိမ်းထားခဲ့သည်။
၁၉၃၇ ခုနှစ်တွင် Imago သည် Freud မှဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ကိုထုတ်ဝေခဲ့သည်။ အကယ်၍ အကယ်၍ မောရှေသည်အီဂျစ်ဖြစ်ပါက၊ Akhenaton သည်သူ၏တိုင်းပြည်နှင့်ဘာသာရေးသင်ကြားရေးအတွက်စည်းကြပ်ရန်ကြိုးပမ်းခဲ့သောဘာသာရေးအသစ်နှင့်အလွန်ဆင်တူကြောင်းပြသခဲ့သည်။ မောရှေကိုရည်ညွှန်းသည်။ ထို့အပြင် Sigmund Freud မှ“ ဂျူးတို့၏အယူဝါဒမှာ 'Shema Yisrael Adonai Elohénu Adonai Echod' ဟူ၍ ဖြစ်သည်။ "( 'ဣသရလေ! ထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူသောငါတို့၏ဘုရားသခင်တမိနျ့တျောမူ၏စကားကိုနားထောင်ကြလော့') ဟီးဘရူးအက္ခရာကဲ့သို့သူ့ကိုအလိုအရ" ဃဏ "နှင့်" t "နှင့်ရအက္ခရာအဖြစ်" "(အ Daleth) သည်အီဂျစ်အက္ခရာမှ assimilated ဖြစ်ပါတယ်" e” ကိုရှေးဟောင်းဘာသာစကားနှစ်မျိုးဖြင့်လဲလှယ်နိုင်သည်။ ဤဝါကျကိုအောက်ပါအတိုင်းဘာသာပြန်ဆိုနိုင်သည် -“ ငါတို့စကားကိုနားထောင်ကြလော့ ဘုရားသခငျသညျဘုရားသခငျသာ Aten ဖြစ်ပါသည် " သို့သော်အထက်တွင်ကျွန်ုပ်တို့တွေ့ခဲ့သည့်အတိုင်းအာကင်နတ်သည်ကိုးကွယ်မှုကိုကိုးကွယ်ရမည့်တစ်ခုတည်းသောဘုရား Aten ဖြစ်သည်ဟု Akhenaton ကကြေငြာခဲ့သည်
ဟီဘရူးဘာသာဖြင့် Adonai သည် "ငါ၏သခင်" ကိုဆိုလိုသည်။ ဤစကားလုံး၏နောက်ဆုံးအက္ခရာနှစ်လုံးဖြစ်သော "a" သည် "my" သို့မဟုတ် "mine" ဟုအဓိပ္ပာယ်ရသောဟေဗြဲနာမ်စားတစ်ခုဖြစ်ပြီးပိုင်ဆိုင်မှုကိုနှိုးဆွပေးသည်။ Sigmund Freud က“ Adon” (Lord) ဟူသောစကားလုံးသည်အီဂျစ်စကားလုံး Aten ၏ဟေဗြဲဘာသာပြန်ကျမ်းဖြစ်ကြောင်းမှန်ကန်စွာထောက်ပြခဲ့သည်။ အမှန်မှာအီဂျစ် "t" သည်ဟီဘရူးဘာသာတွင် "d" ဖြစ်လာပြီး "e" သည် "o" ဖြစ်လာသည်။
“ အသီးအသီးတို့သည်မြက်ပင်ကိုဝစွာစားတတ်ကြ၏။ သစ်ပင်များနှင့်မြက်ပင်များစိမ်းသည်။ သူတို့အသိုက်မှပျံသန်းသောငှက်များ၊ သူတို့၏ဆန့်သောတောင်ပံများသည်သင်၏ဖြစ်တည်မှုကိုကိုးကွယ်ကြသည်။ တိရစ္ဆာန်တွေအားလုံးခြေထောက်ပေါ်ခုန်ဆင်းကြတယ်။ သငျသညျထိုသူတို့အဘို့မတ်တတ်ရပ်သောအခါ, ပျံသန်းသောသူအပေါင်းတို့နှင့်သမျှသောပြည်, အသက်ရှင်။ စက်လှေများကဆင်းသွားပြီးလက်ရှိတက်နေသည်။ မင်းပေါ်လာလို့လမ်းတိုင်းပွင့်နေတယ်။ မြစ်၏မျက်နှာပြင်ပေါ်ရှိငါးများသည်သင့်ဆီသို့ခုန်ထွက်လာသည်။ သင်၏ရောင်ခြည်များသည်ပင်လယ်အစိမ်းရောင်သို့ရောက်သွားသည်။ » (François Daumas, La civilization de l'Égypte pharaonique, Arthaud, 1965, p ။ 322-323)
တိရစ္ဆာန်ဘို့မြက်ပင်ကို၎င်း၊ လူသုံးဘို့စပါးပင်ကို၎င်းပေါက်စေတော်မူသဖြင့်၊ မြေကြီးသည်အသီးအနှံများစေမည်အကြောင်း၊ စပျစ်ရည်သည်လည်းလူတို့ကိုရွှင်လန်းစေ၏။ ဆီအားဖြင့်လည်းသူတို့မျက်နှာကိုပြောင်စေတော်မူ၏။ လူ၏နှလုံးကိုထောက်မသောသူ၊ စိုက်တော်မူသောလေဗနုန်အာရဇ်ပင်တို့သည်လည်းရောင့်ရဲလျက်ရှိကြ၏။ ငှက်တို့သည်အသိုက်လုပ်သောနေရာဖြစ်သည်။ မြင့်သောတောင်တို့သည်တောဆိတ်များမှီခိုရာ၊ ကျောက်တို့သည်မြက်ပင်ကိုစားရလိမ့်မည်။ ကြီးစွာသောကျယ်ဝန်းသောပင်လယ်လည်းရှိ၏။ အဲဒီမှာသင်္ဘောများ [... ] ကျင်လည်ကျက်။ "
ထို့ကြောင့်အီဂျစ်လူမျိုးအာခန်နတိုသည်မောရှေအားဘာသာရေးကိုးကွယ်မှု၏ပရောဖက်ဖြစ်လိမ့်မည်။ သူသည်ဓမ္မဟောင်းကျမ်းနှင့်အထူးသဖြင့်ဆာလံ ၁၀၄ တွင်အနည်းငယ်ပြုပြင်မွမ်းမံထားသည့် Aten သို့ဓမ္မသီချင်းကိုရေးသားခဲ့သည်။
မေရာရိ, ကမ္ဘာ ဦး ၄၆.၁၁ တွင်လေဝိသားများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်ဟုဖော်ပြထားသည်။ အီဂျစ်တွင်၎င်း၏အမည်နှင့်ကိုက်ညီသည် Merire.
ထို့ကြောင့်၎င်းတို့သည် Amarna ရှိ Akhenaton တွင်အမှုဆောင်ခဲ့ပြီးသူသည်သိနာနှင့်အတူလိုက်ပါခဲ့သည့်မြင့်မားသောဂုဏ်အသရေရှိသူများဖြစ်ကြောင်းထင်ရှားသည်။ ၎င်းကမောရှေနှင့်အာခန်နတိုတို့သည်အတူတူပင်ဖြစ်ကြောင်းထပ်မံအတည်ပြုသည်။
Akhenaton သေဆုံးခြင်းသည်နက်နဲသောအရာဖြစ်သည်။ အမှန်မှာသူသည်ဂိဇာပိရမစ်ကြီး၏ sarcophagus တွင်ရှိသောပtheိညာဉ်သေတ္တာကိုခိုးယူခြင်းဖြင့်အီဂျစ်ပြည်မှထွက်ပြေးသွားလိမ့်မည်ဖြစ်သည်။
- Akh-En-အပြစ်ဖြေခြင်းကိုပြု အဆိုပါဖြစ်ပါသည် 1er လူကို ယင်းအပြစ်ဖြေခြင်းကိုပြုကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ။
- The ဧဒင်ဥယျာဉ်၏ဥယျာဉ်တော် အဆိုပါဖြစ်ပါသည် ပရဒိသုဆုံးရှုံးခဲ့ရ.
- The ထိုဥယျာဉ်ကိုအပြစ်ဖြေခြင်းကိုပြု (Akh-and-အပြစ်ဖြေခြင်းကိုပြု) သည်မြို့တော်ဖြစ်ပြီး ပရဒိသုဆုံးရှုံးခဲ့ရ Aten ၏ဝတ်ပြုကိုးကွယ်မှု။
- လူသားမျိုးနွယ်အပေါ်ဖြစ်ခဲ့သည် ဧဒင်ဥယျာဉ်ထဲကနေပြည်ပရောက် တန်းတူ ခမညျးတျောသညျဘုရားသခငျကြလော့.
- Aten ကိုးကွယ်သောလူများဖြစ်ကြသည် အပြစ်ဖြေခြင်းကိုပြု၏ဥယျာဉ်ထဲကနေပြည်ပရောက် တန်းတူ le "ကောင်းကင်ဘုံရှင်အဘ" အပြစ်ဖြေခြင်းကိုပြု-အာဣမြို့.
- Ra-MSES ra ကဆိုပါတယ်ခဲ့သည်မောရှေသည်.
- မောရှေ (မောရှေသည်) နည်းလမ် "မွေးဖွား” (“ ရေမွေးသောသူ” - မြစ်မှ)
- Msès (မောရှေသည်) နည်းလမ် "မွေးဖွား"(" Ra-MSES ၏ဖြစ်ရပ်မှာ "Ra ၏မွေးဖွားခဲ့ပြီး) ။
- မောရှေ (မောရှေသည်) တစ်ဦးအဖြစ် (ကသားသည်ဖါရောဘုရင်အားဖြင့်ပညာတတ်ခဲ့ အမှေခံ).
- ရာမစ် (Ra-မောရှေသည်) ခဲ့ အမှေခံ ဖါရောမင်းသည်ဟောရ-Em-တယျ။
ယောရှု (ယောသပ်)/Jo-ရှေသ) ကခဲ့ မောရှေ၏ဆက်ခံ (မောရှေသည်) ။
ယောရှု (ယောရှေသ) နည်းလမ် "ဘုရားသခငျသညျရှေ"။
ယောရှု (ယောရှေသ) "စစ်သည်တော်ပြောသည်ခဲ့နုန်၏သား"။
ယောရှု (ယောရှေသ) နှင့် ခါနာန်သိမ်းပိုက် (ထိုအခါတစ်ခုမှာဘုရားသခင့ Adon ၏ရှေးခယျြပြည်သူ့အဲဒီမှာ installed)
ယောရှု (ယောရှေသ) "ရှိသည်ယူဆနေနေရောင်ကိုရပ်တန့်"။
Nefer-Titi ဆိုသည်မှာ“ The Belle လာ၏။ "
- Nefer-Titi ပါ မင်းသမီး အဲဂုတ္တုပြည်၌။
- စာရာဖြစ်ခဲ့သည် 1èreအမျိုးသမီးတစ်ဦး အာဗြဟံသည်။
- Nefer-Titi ပါ 1èreအမျိုးသမီးတစ်ဦး Akh-my-Aten ၏။
- စာရာသည်ဟန်ဆောင်ဟန်ဆောင်ခဲ့သည် အစ်မ အာဗြဟံသည်။
- Nefer-Titi ပါ အစ်မ Akh-my-Aten ၏ -or တစ်ဝက် soeur- ။
- Nefer-Titi သားတို့အားပေးနိုင်တယ်လို့ Akh-my-Aten ရန်။
- Nefer-Titi လူငယ်တစ်ဦးနှင့်လှပသောသူစိမ်းပေးခဲ့တယ် (Ki-Ya) သူမ၏ခင်ပွန်းမှဒုတိယဇနီး Akh-my-Aten, ဒါကြောင့်သူမသူ့ကိုသားကိုအပ်ပေးတော်မူ၏.
- စာရာသို့သော်ထို့နောက်၏ဘုရားသခင့ပျော်ရွှင်မှုကိုရှိခဲ့ပါတယ် တစ်စက္ကန့်သားကိုပေးပါ အာဗြဟံသည် (ဣဇာက်သည်).
- Nefer-Titi သို့သော်ဘုရားသခင့်ပျော်ရွှင်မှုကိုရရှိခဲ့သည် တစ်စက္ကန့်သားကိုပေးပါ Akh-En-Aton (Tout-Ankh-Amon, Akh-En-Aton ၏သား: Akh ၏သား) -Akh Is ( "သား" ကိုဆိုလိုသည် "Is") ။
သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့မှတ်မိရမည့်အချက်မှာကျွန်ုပ်တို့၏မည်သည့်ဘာသာကိုမဆိုကျွန်ုပ်တို့ပိုင်ဆိုင်သည် ဘုရားသခငျသာ ငါတို့မြေကြီးပေါ်မှာတာဝန်တစ်ခုတည်းပဲရှိတယ်။ ကျနော်တို့တစ်ဦးချင်းစီကတခြားကိုချစ် (အခြားအရာအားလုံးကခြယ်လှယ်ရုံပဲ။ )
SOURCE မှ: http://moiseetramses.tumblr.com/post/34415219973/resume-des-correspondances-entre-la-bible-et
€2မှအသစ် 24,90
8 € 21,50 ကနေအသုံးပြုခဲ့သည်
€ 24,90 ကိုဝယ်ပါ
နောက်ဆုံးနောက်ဆုံးအောက်တိုဘာလ 28, 2020 9:13 pm တွင်နောက်ဆုံးတင်ခဲ့သည်
Hubert Reeves၊ နှလုံးမှမြင်နိုင်သောကမ္ဘာ - မှတ်တမ်းရုပ်ရှင် (၂၀၁၈)
Viola Davis ကအကောင်းဆုံးမင်းသမီးများအတွက်ချီးမြှင့်အနိုင်ရဖို့အတွက်ပထမဦးဆုံးလူမည်းဖြစ်လာ
ကျောင်းသားများ - Jiddu Krishnamurti (အသံ)
ဂရုစိုက်မှုဆိုင်ရာသိမ်မွေ့သောအနုပညာ - မာ့ခ်မန်ဆင် (အသံ)